musha Products DataNumen Exchange Recovery Shanduro iri Parizvino muKudzorera Mode
Ruzivo rwakadzama nezve "Exchange iri Parizvino muKudzorera Mamiriro" Meseji
Chinjana Kudzoreredza Mode:
Microsoft Outlook 2003 neshanduro nyowani dzinounza chinhu chitsva chinonzi Yakachengetwa Shanduro Mode. Yakachengetwa Shanduro Mode inopa akawanda mabasa ekugadzirisa uye einternet mashandiro zvakanaka uye zviri nyore. Imwe yacho ndeye Chinjana Kudzoreredza Mode.
Kana iyo Exchange server, dhatabhesi, kana mailbox inosangana neiyo offline fodhi (.ost) faira inogadziriswazve, kana kuti pane kusawirirana pakati peiyo Exchange mailbox uye iyo OST faira, saka kana iwe uchimhanyisa Outlook 2002 kana yekare vhezheni, kana kumhanya Outlook 2003 uye nyowani shanduro asi uine Yakachengetwa Shanduro Mode akaremara, uye sarudza kushanda online, ipapo Outlook ichagadzira nyowani OST faira yeiyo nyowani mailbox. Zvekare OST faira harizobviswa, asi haugone kuwana iyo data irimo. Gare gare kana iro rekutanga bhokisi retsamba rave kuwanikwa zvakare, iwe unozokwanisa kuwana iyo data mune yekare OST faira, asi izvo zviri mu new OST faira rinenge risingasvikike zvakare. Kana iwe uchida kuwana iyo data mune zvese zviri zviviri OST mafaera, iwe unofanirwa kugadzirisa iwo maProfiles nemaoko kuti uvaendese kune iwo anoenderana OST mafaera, izvo zvisingaite.
Nekudaro, kana iwe uri kushandisa Outlook 2003 uye gare gare vhezheni, uye iyo Yakachengetwa Shanduro Mode inogoneswa, ipapo iwe uchaona inotevera yambiro meseji kana yako Shanduko bhokisi retsamba ragadziriswazve kana risingaenderane:
Shanduro parizvino iri mukupora mode. Iwe unogona kana kubatanidza kune yako Exchange server uchishandisa network, shanda isingaiti, kana kukanzura iyi logon.
iyo inoratidza Outlook uye Shanduko izvozvi zviri mu Chinjana Kudzoreredza Mode.
When in Chinjana Kudzoreredza Mode, une sarudzo mbiri:
Offline modhi. Kana ukasarudza Shanda Offline, iwe unogona kuwana iyo data mune yako yekare OST faira, asi kwete kuSeva Exchange. Zvekare OST faira richiri kuwanikwa mumhepo isingawanikwe.
Maitiro epamhepo. Kana ukasarudza batanidza, iwe unogona kuwana iyo Exchange server, asi kwete kune yekare OST faira. Kana iwe uchida kuwana data mune yekare OST faira, unogona kubuda Outlook uye start zvakare mukati Offline maitiro.
Nekudaro, nekusarudza sarudzo dzakasiyana, unogona kuwana iyo yekare OST faira kana bhokisi nyowani nyowani pane Shanduro server nekusarudza.
In Chinjana Kudzoreredza Mode, unogona chinja chekare OST faira mufaira rePST kufambisa data rayo kune idzva Shanduko bhokisi retsamba.
Kana gare gare iro rekare Shanduko bhokisi retsamba richisangana nerekare OST faira rinowanikwa zvekare, wobva wasarudza batanidza, iwe uchabuda Chinjana Kudzoreredza Mode Zviri nyore.
Nekudaro, kana iro bhokisi retsamba risingawanikwe zvachose, kana hazvienderane nezvakare OST faira nekuda kweiyo OST faira huori, wobva wabuda sei Chinjana Kudzoreredza Mode uye kuita kuti Outlook ishande zvakajairika zvakare? Pazasi pane mhinduro.
Buda Exchange Shanduro Yemamiriro uye Shanda Zvakajairazve:
Kana iyo Exchange mailbox isingawanikwe zvachose, kana inopesana neyekare OST faira nekuda kwehuori hwefaira, ndokumbirawo uite zvinotevera kuti ubude Chinjana Kudzoreredza Mode uye rega Outlook ishande zvakajairika zvakare:
Vhara Microsoft Outlook uye chero chimwe chirongwa chingangowana chekare OST ikwidzwe.
Tsvaga iyo yekare OST ikwidzwe. Unogona kushandisa kutsvaka shanda muWindows kutsvaga iyo OST faira. Kana tsvaga mu nzvimbo dzakafanotaurwa yefaira.
Nunura iyo isina data data mune yekare OST ikwidzwe. Zvekare OST faira rine dhata risingabvumirwe, kusanganisira mameseji etsamba uye zvimwe zvese zvinhu, mubhokisi rako rekare reShanduro, izvo zvakakosha kwauri. Kuti ununure idzi data, unofanirwa shandisa DataNumen Exchange Recovery kuongorora yekare OST faira, dzoreredza iyo data mariri, uye wozvichengeta muAptlook PST faira kuitira kuti iwe ugone kuwana ese mameseji uye zvinhu muAptlook zviri nyore uye zvine mutsindo.
Backup yekare OST ikwidzwe. Nekuda kwekuchengeteka, zvirinani uzvichengetedze.
Bvisa Cached Shanduro Yemamiriro.5.1 Start Maonero.
5.2 Pane iyo Tools Menu, baya E-Mail Maakaundi, chengeta Wona kana shandura maakaundi eemail aripo, uye ipapo tora Next.
5.3 Mu Maitiro ekuona e-mail emaakaundi aya nenzira inotevera rondedzero, tinya Exchange Server e-mail account, uye tinya chinja.
5.4 Pasi Microsoft Shanduro Server, tinya kuti ubvise iyo Shandisa Cached Exchange Mode chengeta bhokisi.
5.5 Buda Outlook.
Dzorerazve zita kana kudzima iro rekare OST ikwidzwe.
Batidza Cached Shanduri Mode.7.1 Start Maonero.
7.2 Pane iyo Tools Menu, baya E-Mail Maakaundi, chengeta Wona kana shandura maakaundi eemail aripo, uye ipapo tora Next.
7.3 Mu Maitiro ekuona e-mail emaakaundi aya nenzira inotevera rondedzero, tinya Exchange Server e-mail account, uye tinya chinja.
7.4 Pasi Microsoft Shanduro Server, tinya kuti ikwanise iyo Shandisa Cached Exchange Mode chengeta bhokisi.
7.5 Buda Outlook.
Vaka patsva OST Faira. Restart Outlook uye uve nechokwadi chekuti marongero eiyo itsva Exchange mailbox account muAptlook ndeechokwadi, uye Outlook inokwanisa kubatana kune yako Exchange server zvinobudirira. Wobva watumira / gamuchira maemail ako pane inoenderana Exchange mailbox, iyo ichaita kuti Outlook igadzire nyowani faira yepamhepo faira uye otomatiki data rayo neExchange mailbox. unofanira kuidzima uye kugadzira imwe nyowani, seinotevera:
8.1 Vhara Microsoft Outlook.
8.2 Dzvanya Start, uye ipapo tora Control Panel.
8.3 Dzvanya Chinja kuClassic View kana iwe uri kushandisa Windows XP kana yepamusoro shanduro.
8.4 Tinya kaviri tsamba.
8.5 Mu Tsamba Yetsamba dialog box, dikai Ratidza Maprofiles.
8.6 Sarudza imwe yeiyo isiriyo chimiro mune runyorwa wobva wadzvanya Bvisa kuti aibvise.
8.7 Dzokorora 8.6 kudzamara maprofile ese asiri iwo abviswa.
8.8 Dzvanya wedzera kugadzira nhoroondo nyowani uye wedzera maemail account maererano nemaitiro avo pane Shanduro server.
8.9 Start Outlook uye gadzirisazve bhokisi rako rekutsinhana, iwe uchabuda Chinjana Kudzoreredza Mode.
Tumira iyo data yakadzoserwa padanho rechitatu. Mushure mekunge wabuda Chinjana Kudzoreredza Mode, chengeta iyo nyowani OST faira yeiyo Exchange mailbox yakavhurika, uye wozovhura iyo PST faira inogadzirwa nhanho 3 neAptlook. Sezvo iine data rese rakadzoserwa mune yako yekare OST faira, unogona kuteedzera zvinhu zvinodiwa kune yako nyowani OST faira sezvaunoda.